29 | avril | 2020 | InfoKmada
Polisy maty tany Ambanja: melohin’ny CNIDH
InfoKmada - 29 avril 2020 0
Melohin’ny CNIDH ny famonoana polisy nitranga ny 25 Aprily teo tany Ambanja. Miantso ny fitondram-panjakana ny filohan’ny CNIDH handray ny andraikiny mikasika izany. Mifamatotra tanteraka hoy izy ny kolikoly sy ny tsy fanajàna ny zon’olombelona ary mila hamafisina haingana ny fanafoanana azy.
TRG : am-perinasa manolo ireo fantsona tranainy mitondra rano
Am-perinasa ny orinasa TRG International Pipeline Company Ltd avy any Afrika Atsimo miara miasa amin’ny Jirama amin’ny fanoloana ireo fantsona tranainy mitondra rano. Nanombohana izany ny teny Ilanivato Anosipatrana, nampiasana ireo teknolojia vaovao.
« PAM » : hisy fiantraikany ratsy amin’ny famokarana sakafo ny Coronavirus
Hisy fiantraikany ratsy amin’ny fambolena sy ny famokarana sakafo ny valan’aretina Coronavirus ary isan’ny ho tratran’izany i Madagasikara raha ny nambaran’ny solotena maharitry ny Sampandraharahan’ny Firenena Mikambana, misahana ny ara-tsakafo. Ireto farany izay mandray anjara feno amin’ny fizarana ny « Tosika Fameno » hahafahan’ireo mpisitraka, hahazo izany ao anatin’ny fotoana fohy.
TOAMASINA : ireo mpiambina ilay sinoa ihany no namono azy
Ireo mpiambina azy ihany no namony ilay Sonoa tao Toamasina taorian’ny famotorana sy ny fanadihadiana nataon’ny teo anivon’ny police nationale any an-toerana. Tao an-tokotany fonenan’ilay sonoa iany no nadevenan’izy roa lahy ireto ny razana. Hitohy hatrany ny famotorana ary natolotra ny fitsarana izy roa lahy ireto.
Fikambanana Fitia : sekoly 4 no notsinjarainy ny vatsy tsinjo avy amin’ny fitondrana
Sekoly maro teto an-drenivohitra no nizaran’ny vadin’ny filohan’ny repoblika ny vatsy tsinjo avy amin’ny fitondram-panjakana. 140 ohatra ny mpampianatra nisitrak’izany teny anivon’ny CEG Nanisana. Hitondra fahavitriana ho an’ny mpampianatra amin’ny fanohizana ny fampianarana anatin’ny fiatrehana ny valan’aretina ny fanampiana toy izao hoy ny talen-tsekoly eny an-toerana.
Visite technique taxi be : maimaimpoana mandritry ny fahamehana ara-pahasalamana
Maimaimpoana ny fanatanterahana ny visite technique ho an’ireo taxibe anatin’ny zone urbaine sy suburbaines mandritra ny fotoana voafaritry ny famehana ara-pahasalamana araka ny fanambarana navoakan’ny DGSR. Entina hanamaivanana ny mpitatitra no anton’ny fanapahan-kevitra.